Sei Kupindura Muite Phone anodana Apple Watch
Kubvumbi 14, 2020 na Nhungamiro Yedzidziso Siya Revo
Wakambonzwa edza zuva yaizouya apo tinogona kudana mumwe zvakananga kubva pamaoko edu? Zvisinei zvinoratidzika penhumbi kuti Sci-Fi chakagadzirwa, Zvisinei unogona, chaizvoizvo, kuita uye kuwana foni iri Apple Watch. On Apple Watch, kunoda vari pavakandirambidza kushamwaridzana nerimwe kubudikidza iPhone, asi iwe unogona kupindura kunyange iPhone wako mune imwe kamuri kana yakavigwa muhomwe, akatakura pamusoro rose hurukuro zvakananga kubva wachi yako.
1 Kupindura munhu Call musi Apple Watch
2 Kuita Call musi Apple Watch
Kupindura munhu Call musi Apple Watch
Panguva apo chikumbiro achipinda, unofanira kungoti pavanoshandisa munyoro mhinduro bhatani. Kuri kuti havadi mundipindure, unogona pavanoshandisa dzvuku kuderera bhatani uye kutumira chikumbiro inzwi mashoko.
Unogona saizvozvo kusarudza kupindura kusvika iPhone wako kana kutumira pakarepo shoko. Panguva apo chikumbiro achipinda, adzorere Digital Crown kana Rova zvakasimba kumusoro kusvika izvi zvaramba.
Kuri kuti uri kuungana kana kazhinji akabatikana uye hanya kunyaradza kwenyu Apple Watch mangwanani, unogona nokukurumidza kunyaradza ruzha pedyo kumutumidza kufukidza Apple Watch kuti Display pamwe muchanza ruoko rwenyu nokuda masekonzi matatu. Panguva iyoyo pombi wokusimbisa kuti anyarare iri simba.
Kuita Call musi Apple Watch
Unogona kuita runhare vanhu Favorites zvaunonyora nokudzikisira kurutivi bhatani pasi Digital Crown. Panguva iyoyo, adzorere Digital Crown kana kuti tap initials vanhu kuti kusarudza. Panguva iyoyo, Tap chikumbiro chiratidzo pangoro akasiya kukona chidzitiro.
On the kubvisa mukana kuti unofanira kudanwa mumwe ari kwete Favorites zvaunonyora, vawane mashoko Phone kushanda musi Apple Watch uye vanodzorera Digital Crown kana Rova zvakasimba kuti ndinotaura pamwe uchida kuzodana. saizvozvo Unogona kukumbira Siri kuti runhare kwamuri nokutaura “kufona” uye zita mumwe ari rundown kwenyu vokukurukura. Siri achaisa runhare iwe.
Kutaura pamusoro Apple Watch anonzwa yakati kujairika kubvira pakutanga, uye iwe unofanira kuramba inokosha kure nawo akazaruka kubva kunoita kuti zvakaoma kunzwa mumwe kubva Apple Watch mutauri kana pane yakapoteredza nyonganyonga. Kubvuma nzira iyo Apple Watch riri, chero zvazvingava, zvemariro dzinobatsira chiitiko kuti unofanira kukurukura naye munhu uye iPhone wako haisi pedyo. Mukuwedzera, unogona kupindura kusvika Apple Watch, tora nguva yakawanda sezvo zvakafanira kusvika iPhone wako, uye vanotova ufambe pamusoro paunenge vakagadzirira. Haina ndakarovha vachidzifudza.
Check out ino zvinosanganisira mashoko zvakakwana pamusoro Sei Kupindura Muite Phone anodana Apple Watch Pasina Pairing kuna iPhone. Verenga nyaya nokungwarira uye tevedzera nzira iyo rinotsanangura kuti mhinduro uye zvinoita foni nyore.
Wakasununguka kubvunza queries ako nechokuita ino uchishandisa pazasi kutaurwa Comment bhokisi. Uye kushanyira Website yedu downloadfacetime.com nokuti zvikuru mashoko kugara.
Maitiro Akapusa Ekushandisa FaceTime paApple Watch
Tarisa Skype kupesana nePrime Nguva Kuenzanisa 2020
Mashandisiro Aungaita Skype pane Android Chidimbu
Yakazodzwa Pasi: Download Facetime Tagged With: Sei Kupindura Muite Phone anodana Apple Watch
Easy nzira yeku Dhawunirodha uye Kumisikidza Nzvimbo mune i-Pad
Copyright © 2020 · Magazini pro on Chiumbwa chaGenesi · WordPress · Log in
Zvinodiwa Kugara Kugoneswa